Google waxay damacsan tahay inay 5G dunida u keento diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan qoraxda | Wararka IPhone
Kadib Mashruucii cajiibka ahaa ee Google Loon ee Google, mahadsanidiisa loogu talagalay in lagu qaado isku xirka internetka meelaha uusan wali gaarin, iyadoo la adeegsanayo buufinno soo daaya hirarka WiFi iyo ka faa'iideysiga mawjadaha dabaysha, hadda way timid Mashruuca Skybender.
Waana sida laga soo xigtay wargayska caanka ah ee The Guardian, Google ayaa u shaqeynaya u keen 5G xiriir adduunka oo dhan iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan 'drones' iyo milimitir gudbinta mowjadda.
Mowjadaha millimitir horay ayey u isticmaaleen militariga tan iyo DARPA Waxay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan iyaga wixii ka dambeeyay 2012, hase yeeshee hadda waa markii loo soo sara kiciyey inay adeegsadaan dad aad u tiro badan.
Mawjadahaani waxay bixiyaan faa'iido muhiim ah oo ku saabsan isku xirnaanta aan hadda ognahay, waana taas waxay adeegsadaan muuqaal cusub, Dhibaatada ka jirta tan hada jirta ayaa ah inay si aad ah uga dheregsan yihiin taleefannada gacanta, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi, microwave signals, iwm.
Mawjadahaas milimitir waxay bixin doonaan xawaare isku xira 40 jeer ka sarreeya kuwa ay bixiso waxa loogu yeero LTE, barta kaliya ee taban waa baaxadda, taasna waa in kuwan ku baaba'aya masaafada, sikastaba Google horay ayey uga shaqeysay.
Sida muuqata waxay heshay ogolaanshaha FCC si ay ugu fuliso tijaabooyin nooca drones-ka ah Solara 50 (sida jumladaha aan soo bandhigno) ee New Mexico illaa Julaay.
Diyaaraddan aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan 'drone' oo ay abuurtay Titan Aerospace (waxaa iibsaday Google) sidoo kale wuxuu ahaa warar markii uu burburay May 1, 2015 kaliya si kor loogu qaado duulimaadka, shil nasiib wanaag nasiib wanaag iyo mahadnaq ay ka muujiyeen taxaddarrada ay sameeyeen shirkadaha teknolojiyadda waaweyn aysan u horseedin dhaawacyo.
Xaqiiqdii sanadkan oo dhan waxaan ka baran doonnaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan mashruucan, laga yaabee Google sida ay ugu sameeyeen Mashruuca Dayaxa ama laga yaabee inay ku mahadsantahay daadinta, sikastaba, waxaan rajeynayaa in mashruucan noocan ah uu guuleysan doono uuna maamuli doono inuu internetka keeno adduunka oo dhan isticmaalka tikniyoolajiyadda iyo tamar nadiif ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Tijaabooyinka Google ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee qoraxda oo bixiya isku xirnaanta 5G
Apple ayaa bilaabi doonta olole cusub "Shot on iPhone 6s"